Newcastle United oo taako u dhigtay Manchester United oo marti ugu ahayd garoonka St. James’ Park… +SAWIRRO – Gool FM
Newcastle United oo taako u dhigtay Manchester United oo marti ugu ahayd garoonka St. James’ Park… +SAWIRRO
Dajiye December 27, 2021
(Newcastle) 27 Dis 2021. Newcastle United ayaa taako u dhigtay Manchester United oo marti ugu ahayd garoonka St. James’ Park, kaddib markii ay ku kala baxeen barbardhac 1-1 ah, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Newcastle United.
Daqiiqadii 7-aad kooxda Newcastle United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay laacibkooda Allan Saint-Maximin kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis Sean Longstaff.
71 daqiiqo marka ay ciyaarta sii socotay Manchester United ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay weeraryahankooda Edinson Cavani.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay barbardhac 1-1 ah ay ku kala baxeen labada kooxood Newcastle United iyo Manchester United, kaddib ciyaar xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka St. James’ Park.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag ee Kooxaha Newcastle iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Horudhac: Leicester City vs Liverpool... (Foxes oo ay xaaladdu ku adag tahay iyo Reds oo xiddigo muhiim ah dib u heleysa)